alaysia Relif Association NGO အဖွဲ့ မှ ရခိုင်မှ ဒုက္ခသည်များ အတွက် ထပ်မံ သွားရောက် လှူဒါန်း | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
This entry was posted on March 12, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ခွန်ဆာအကြောင်းသိကောင်းစရာ။	ရခိုင်မှ ထွက်ပြေးလာသည့် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် ၁၂၆ ဦး မလေးရှားရေတပ် ကယ်ဆယ် →